Ogaden News Agency (ONA) – Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU) Nairobi oo Shir Balaadhan oo Wacyigalin ah u Qabtay Dadweynaha
Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU) Nairobi oo Shir Balaadhan oo Wacyigalin ah u Qabtay Dadweynaha
Sidaad ka akhrisateen shabakadaha wax ka qoraya halganka shacabka S.Ogadenya, waxaa magaalada Nairobo ee caasimada wadanka Kenya lagu Qabtay shir balaadhan oo ay soo abaabuleen Ururka Midowaga Dhalinta iyo Ardayda Ogadenia ee OYSU. Shirkan oo ahaa shir abaabul iyo wacyigalineed ayaa waxaa ka soo Qayb galay Qaybaha kala duwan ee Bulshada magaalada Nairobi.
Shirka waxaa lagu casumaya Madax sare oo ka socota Jabhada Wadainga Xoraynta Ogadenia iyo masuuliyiin kasocotay dowlada Kenya ee martida loo ahaa waxana.
Sidoo kale Shirka waxaa lagu casumay Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku sugan magaaladaNairobi, sida Jaaliyada Jubbaland, Puntland,Somaliland, iyo Jaaliyada reer Muqdisho.
Shirkan oo kamid ah shirarkii ugu balaadhnaa ee Ururka OYSU uu ku qabto magaalada Nairobi ayaa waxaa Khudbado kala duwan ka jeediyay madaxda iyo masuuliyiintii lagu casuumay, waxaana kamid ahaa mudane Cabdullahi Xaliye iyo Dr Cabdiraxmaan Dheere oo kawada tirsan Golaha Dhexe ee JWXO.
Shirkan ayaa waxaa furay xoghayaha ururka OYSU fariciisa Nairobi Mudane Qadri Faarax Maxamuud oo ugu horayn u mahadceliyey dhammaan kasoo qayb galayaasha iyo masuuliyiinta shirka lagu casuumay.
Madaxdan iyo masuuliyiintii kale ee hadashayba waxay si Qoto dheer uga Hadleen halka uu marayo Halganka Gobanimadoonka ah ee JWXO, Hormuudka ka tahay iyo marxaladihii kala duwanaa ee Halganku soo maray.
Dhamaan masuuliyiintii madasha kahadashay ayaa siwayn u bogaadiyay Kaalinta Hormuudnimo ee Ururka OYSU uu maanta ku leeyahay Halganka shacbiga, waxayna ku booriyeen inay sii laba jibaaraan dadaalkooda ayna ku xisaabtaan in ay dhaliyaan xoriyada shacabka Ogadenia uu u Ooman yahay.
Intii uu shirku socday waxaa lagu soo bandhigay suugaan halgameed kaladuwan oo ay kamid ahaayeen dhaantooyinka oo hadda noqday suugaankta ugu xiisaha badan bulshada dhexdeeda.
Muuqaalada shirka iyo suugaantiiba waxaad kala socotaan saacadaha soosocda ILeys Tv.